E kpughere Snapdragon 835 na CES na Las Vegas | Akụkọ akụrụngwa
Qualcomm na-ewebata Snapdragon 835 nwere etiti asatọ, Ndenye Nchaji 4.0 na ndị ọzọ na CES
Manuel Ramirez | | Ngwa, Noticias
Qualcomm emechaala kpughere atụmatụ niile nke mgbawa flagship maka afọ a 2017 na nke anyị ga-ahụ na ezigbo ndepụta nke ngwaọrụ ndị dị elu nke a ga-eweta na ọkara nke afọ. Mgbe ekwuputachara ya na Nọvemba, gosipụtara ya ugbu a na CES na Las Vegas.
Ọ bụ otu n'ime isi mmalite nke CES 2017, mgbe Qualcomm kwuputara mgbawa Snapdragon 835. Raara onwe ya nye iji rute na mbido mbu nke ngwaọrụ gam akporo, ndị ọrụ nwere ike ịtụ anya 20% na-awụlikwa elu na ọrụ dị iche iche CPU, arụmọrụ arụmọrụ ka mma, yana nkwado ọsọ ọsọ 4.0.
Snapdragon 835 bu ọwọrọiso maka mbenata ya n'ichepụta usoro site na 14nm ruo 10nm. Nke a na - ebute pasent 25 na - erughị ike iji ihe karịrị 820. E gosipụtakwara na enwere mbelata 50% na oriri ike ma e jiri ya tụnyere 801 3 afọ gara aga.
Qualcomm kwuru banyere ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na-adọrọ mmasị dịka otu ụbọchị nke oge mkparịta ụka, ihe karịrị 5 ụbọchị nke audio playback ma ruo ihe dị ka awa 7 nke 4K na-akpọghachi ọdịnaya.
Nkwado na- Ndenye Ndenye 4.0 na-enye ikike nke ike 5 mgbe ejikọtara ya na ntanetị maka nkeji 5. Ọhụrụ a nke mgbawa na-enye na 4.0 ruo 20 pasent ụgwọ ngwa ngwa mgbe ị na-enwe okpomọkụ na 5 Celsius Celsius.
Ọzọ nke nnukwu ọdịiche dị na 820 na 821 nke 2016 bụ na afọ a mgbawa nwere gara aga cores asatọ Kryo 280 nke ga-eji nnukwu ihe.LITTLE ụlọ maka 20% arụmọrụ na-abawanye na ngwa ngwa, nchọgharị weebụ na VR.
Anọ arụmọrụ dị elu anọ nwere ike ịtọ otu elekere ọsọ ọsọ ruo 2,45 GHz, ebe ndị ọzọ ga-agbago 1,9GHz iji nweta "ụyọkọ arụmọrụ" ebe 80% nke oge nhazi ga-ewere ọnọdụ.
Na GPU ma ọ bụ akụkụ arụmọrụ, Adreno 540 na-akwado 4K @ 60fps na-egosipụta 25% eserese dị elu karịa. Hexagon 690 DSP na-ahụ maka nhazi akara ngosi dijitalụ na-akwado Google TensorFlow, nke na-enyere igwe mmụta ọrụ na ngwaọrụ, dịka olu na ihe nchọpụta, nsụgharị mmegharị aka, na nyocha biometric.
Ihe ndị ọzọ gụnyere modem X16LTE ma melite nhazi igwefoto. N'akụkụ njikọta, enwere nkwado maka mkpokọta ụgbọelu 4x, 4 × 4 MIMO, Bluetooth 5.0 na 802.11ad Wi-Fi, yana mgbakwunye agwakọrịrị maka mbugharị ka mma, elebara anya akpaaka na mmezi vidiyo.
La ọkara nke mbụ nke 2017 a ga-ewepụta ekwentị ndị ahụ ga - ebu ya n'ọta ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Qualcomm na-ewebata Snapdragon 835 nwere etiti asatọ, Ndenye Nchaji 4.0 na ndị ọzọ na CES
Samsung gosipụtara na ọ ga-aga n'ihu na Nkọwa 8, a ga-ewepụta ya na Septemba
Telegram na-akwụsị ịkwado nsụgharị gam akporo tupu 4.0